Pyi Twin Phyit Shopping | Product Detail
09-96 990 79 74
မူလစာမျက်နှာ Blue Pond 100% Speciality Arabica Coffee 320g
Blue Pond 100% Speciality Arabica Coffee 320g
အမျိုးအစား: သောက်စရာများ ,
ပစ္စည်း: In stock
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး USDA & EU Certificate လက်မှတ်ရ Organic Coffee များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချနေသော Genius Shan Highlands Coffee လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့ အရသာအနေနဲ့ကတော့ အချဉ်ဓါတ်ပါတဲ့ အသီးအရသာနဲ့ ကော်ဖီ၏မွေးရနံ့ပိုမိုရနိုင်မှာပါ။ Blue Pond Coffeeကို အစေ့အရွယ်အစား အကြီးဆုံးကို light roast level လှော်ထားပြီး ကော်ဖီအစေ့အတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
အနံ့အရသာနှင့် ပြည့်စုံသောကော်ဖီရရှိရန်အတွက် ကော်ဖီကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို ကြိတ်နိုင်သည်။ ကော်ဖီမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန် (၂)ဇွန်းကို ရေနွေး (၆)အောင်စခန့်ဖြင့်ရောစပ်၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကော်ဖီကိုလေလုံသောဗူးနှင့် ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ Oxygen၊ ရေငွေ၊ အပူ၊ အလင်းရောင် (UV) မထိတွေ့အောင်သိမ်းဆည်းရပါမည်။ Hand Drip ဖျော်နည်းအတွက်အထူးသင့်တော်ပါသည်။
Arabica Coffee Bean Screen Size (above 16), Specialty Coffee, Product of Myanmar, Great flavour notes of blue pond specialty coffee – blueberry, raisin, chocolaty, strawberry, plum. Complexity of fruitiness, good mouthfeel
No.76/A 8th QTR, South Okkalapa Industrial Zone, Yangon, Myanmar.
Phone: 09-96 990 79 74
© PYI TWIN PHYIT. All Rights Reserved. Visitors -